Sida loo Daahfuriyo Bog WordPress ah oo loo habeeyay Raadinta | Martech Zone
Sabti, Febraayo 2, 2019 Arbacada, February 6, 2019 Douglas Karr
As WordPress wuxuu sii wadaa qabsashada suuqa ganacsiga, Waxaan sii wadeynaa inaan helno codsiyo badan oo badan oo ka imanaya ganacsiyada waaweyn ee leh goobo qurux badan oo ay naqshadeeyeen sumcado cajaa'ib leh iyo shirkadaha naqshadeynta garaafka - laakiin aan haysan u-habeyn loo baahan yahay si loo saameeyo natiijooyinka raadinta dabiiciga ah. Kahor intaanan xitaa ka shaqeynin xeeladaha nuxurka u ah macaamiisheenna, waxaan ku bilaabaynaa inaan ka caawino iyaga sidii loo wanaajin lahaa. Ma jiraan wax badan oo loo isticmaalo maalgashiga waxyaabaha aasaasiga ah haddii bartaada aan la helin!
WP Garabka, Shirkad adeegyo taageerta WordPress ah, waxay soo saartay liis si dhammaystiran u dhammaystiran kuna daabacday boggan sawir-fudud ee si fudud loo akhriyi karo. Waxaan ka caawinay boqolaal shirkado ah hagaajinta WordPress sidaa darteed anigu 100% laguma iibin liiskooda (faallooyinka hoose), laakiin waxaan ku kalsoonahay in raacitaanka xogtan ay gabi ahaanba kuu heli doonto 99% jidka halkaa ah!
Waxaad u baahan doontaa inaad ku dhisto degelkaaga aasaas wanaagsan. Waxaad ku siin kartaa naftaada madax bilow ah adoo codsanaya 10ka talooyin ee ugu horreeya ee bilowga WordPress ee natiijooyinka ugu fiican SEO
Sida Loo Hagaajiyo Bogga Cusub ee WordPress
Website-ka martigelinta - mid ka mid ah sababaha waxaan u soo haajirnay oo aan jeclaannay Flywheel waa xawaaraha dhacdooyinkooda dalxiis iyo keydinta. Maamulayaasha WordPress ee la maareeyay ayaa si gaar ah loogu dhisay waxqabadka WordPress kamana dhumiyaan inay ku marin habaabiyaan taageerada sida martigaliyayaasha guud ay sameeyaan.
CDN - Haddii martidaada aysan ku siin a shabakada bixinta nuxurka, ku darida mid waa inay noqotaa mudnaan. CDN-yada ayaa ka caawin doona hantidaada bogga inay si deg deg ah u xajistaan ​​kana faa'iideystaan ​​tikniyoolajiyadda biraawsarka iyo shabakadaha juqraafi si ay u xareeyaan xawaaraha goobtaada.
Mawduuca Saaxiibtinimada SEO - Qaab dhismeedka bogga iyo naqshadeynta mawduuca gabi ahaanba waa muhiim marka ay timaado soo bandhigida makiinadaha raadinta oo leh bog aad u fiican. Calaamadeynta HTML5, qaab dhismeedka bogga, hagista, iyo cunsurro kale ayaa dhammaantood saameyn ku leh sida ugu wanaagsan ee mawduucaagu u kala hormariyo waxyaabahaaga si aad ugu raadiso gurguurta oo ay uga faa'iideysato algorithms.
Caching - Mar labaad, inta badan Bixiyeyaasha WordPress ee la maareeyo waxay bixiyaan hanaan adag oo lagu xajiyo. Haddii aadan mid ka ahayn, waad iska qori kartaa shey sifiican u taageersan oo fudud, Rabshad WP.
Categories - Ooh, Anigu ma ihi taageere ka mid ah qaybaha ma-tilmaamidda. Waxaan rumeysanahay in qeybaha ay yihiin kuwo lagama maarmaan u ah soo bandhigida darajooyinkaaga bogga ee mashiinnada raadinta waxaanan leenahay bogag qeyb ah oo ku kala sarreeyaa ereyo ballaadhan oo bogagga madaxbannaan aysan u istaagi doonin fursad. Anigu waxaan u muuqdaa inaan qori doono bogagga sumadda, in kastoo.
Tags - Waxaan noindex tags iyo ha daabicin sumado meta ah qodob ka mid ah mawduucyadeena. LAAKIIN, waxaan gebi ahaanba calaamadeyneynaa waxa ka soo baxa qoraal kasta oo aan daabacno! Sababta Qaar badan oo ka mid ah martidayadu waxay u adeegsadaan raadintayada gudaha si ay u helaan maqaallo - oo ay ku calaamadeeyaan qodobbadaas si wax ku ool ah waxay hubisaa in la helay.
permalinks - A si sax ah slug iyo permalink maqaalku wuxuu labadaba xaqiijin karaa muuqaalka qoraaladaada iyo boggaga raadinta isla markaana soo jiidan kara dareenka baaraha bogga natiijooyinka mashiinka raadinta. Waxaan isku dayeynaa inaanu ka dhigno waxyaabaha ugu hooseeya sida ugu macquulsan uguna hooseeya 1 ilaa 5 erey, kana saareyno wixii shuruudo ah ee aan loo baahnayn.
Faallooyinka Spam - In kasta oo xiriiriyeyaasha nofollow ay bixiyaan WordPress, furitaanka faallooyinka si loo daabaco oggolaansho la'aan waxay u rogi doontaa boggaaga WordPress warshad SPAM ah. Intaas oo kaliya maahan, waxay ka dhigayaan wadahadalka bartaada mid muuqan kara… ha u oggolaan iyaga!
Cinwaannada iyo Sharaxaadaha Meta - Waxaan si adag uga shaqeyneynaa cinwaannadeena iyo sharraxaadda meta si aan ugu hagaajino raadinta. Xusuusnow, cinwaankaagu waa cunsurka ugu muhiimsan bogga iyo kanaga tilmaanta meta waa dood adag oo ku saabsan sababta qof raadinaya u gujinayo xiriiriyahaaga natiijada mashiinka raadinta. Waa inaad si adag ugu shaqeysaa cinwaannadaada iyo sharraxaadda maadada sida aad ugu shaqeyso waxyaabaha aad ka kooban tahay!
Calaamadaha XML - Weligaa ma isku dayday inaad hesho goob cusub oo aan tilmaam lahayn? Hagaag, Khariidada boggaaga XML waxay bixisaa tilmaamo ku saabsan makiinadaha wax lagu raadiyo halka ay ku taal macluumaadkaaga, sida ay muhiimka u tahay, iyo markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo. Goob kasta waa inuu leeyahay Khariidad Raadin XML ah! Waxaan sidoo kale kugula talin lahaa inaad aqoonsato taada Khariidadda bogga ee faylkaaga robots.txt.
Haddii aan wax ka beddeli lahaa liistada, waxaa laga yaabaa inaan ka saaro qaybta oo aan talooyin ku daro oo aan ku daro kuwa soo socda:
Horumarinta Bulshada - Goobuhu waxay ku kala sarreeyaan caan ku ahaanta. Si laguu helo, waa inaad ku xirnaataa. Si lagugu xidho, waa in lagu dalacsiiyaa. Isku-darka daabacaadda bulshada iyo badhamada wadaagista bulshada ayaa muhiim u ah si loo hubiyo in waxyaabahaaga la wadaago oo kor loogu qaado si wax ku ool ah khadka tooska ah.
Maamulayaasha shabakada - Daahfurka degel kasta oo WordPress ah adigoon iska diiwaangelinin Maamulayaasha websaydhka iyo aqoonsiga Khariidadda boggaaga 'XML' waxay ka dhigan tahay inaadan hubinayn in bartaada la helo oo la qoro. Maamulayaasha websaydhadu sidoo kale waxay aqoonsan doonaan dhibaatooyinka boggaaga kaa hortaagan inaad si fiican u darajayso. Hagaaji arrimahaas oo aad si fiican u kala saraysid!
Ka jawaab celinta Mobilada Kalabar dhammaan taraafikada raadinta ayaa hadda socda oo Google ayaa jecel naqshadeynta websaydhka. Adiga oo aan lagaa filayn mobilka, laguma fiicnayn raadinta!
Afeef: Waxaan u adeegsanayaa xiriiriyeyaal ku xiran qodobkaan.
Tags: khasnadocarbinfiicnaanshaha qaybtacdnfaallooyinka faallooyinkashabakada bixinta nuxurkaflywheelbilow goobta wordpresssharraxaadda metasumad metaka jawaab celinta mobiladapermalinksdhajinta slugSEOseo saaxiibtinimomawduuca seocinwaanka seoslugbadhamada bulshadakobcinta bulshadadaabacaadda bulshadabadhamada wadaagga bulshadabadhamada wadaagga bulshadafaallooyinka spamhagaajinta taghagaajinta cinwaankakeyd wordpressqaybaha wordpressmarti gelinta wordpressbilaabida wordpresshagaajinta wordpresswordpress permalinkstags wordpresswp gantaalxml khariidadaha boggayoast seo
Jul 20, 2016 markay ahayd 10:38 AM
Waad ku mahadsantahay maqaalka.
Miyaan ku dari karaa smth?
CDN: Waxaan isticmaalayaa cloidflare CDN - waa bilaash oo dhakhso badan. Runtii waan ku qanacsanahay haddii aad tilmaami lahayd midkee ku talin lahayd.
Marti gelinta - waxaan isticmaalayaa digitalocean - runtii martigelin wanaagsan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay tahay qunsuliyadda iyo sida loola shaqeeyo. Xaaladdaas oo kale waxaad heli doontaa natiijooyin wanaagsan.
Khariidadda bogga XML - haa! waa waxyaabo aad muhiim u ah. Ma fahmi karo dadka ka boodaya. Waad yeelan kartaa isku xirnaan xun, laakiin haddii khariidaddaada boggaaga 'XML' ay caadi tahay - Adigu waad koreysaa
Maxaa ku saabsan astaamaha gundhigga ah? Ma isticmaashaa? haddii bogga noindex, sida bogagga tags, miyaad kugula talineysaa inaad isticmaasho astaamaha astaamaha?
Jul 20, 2016 markay tahay 2:40 PM
Waa salaaman tahay Kottok, waxaan gabi ahaanba kugula talineynaa astaamaha qoraalka. Waxaan aaminsanahay in WordPress ay hadda taageerto iyaga oo qayb ka ah barxadda, sidaa darteed sida caadiga ah kama sameeyo wax gaar ah. Waxaan ku shaqeeyaa Yoast-yada SEO-ga ah waana ka beddeli karaa haddii loo baahdo.
Jul 29, 2016 markay tahay 2:00 PM
Sax, wordpress waxay taageertaa calaamadeynta canoniga ah oo leh plugins hada way fududahay in lagu daro 🙂 Waan jeclahay plugins
Mar labaad waad ku mahadsan tahay maqaalkaaga!